Rio Ferdinand: Inaan koob ku guuleysto lacag waan ka jeclahay. - Caasimada Online
Home Warar Rio Ferdinand: Inaan koob ku guuleysto lacag waan ka jeclahay.
Rio Ferdinand: Inaan koob ku guuleysto lacag waan ka jeclahay.
Rio Ferdinand ayaa qirtay inuu guulihiisa koobabka wax badan ka jecelyahy inuu helo lacag kaash ah. Daafacaan intii uu u ciyaarayey Manchester United ayaa ciyaartoy badani lacag baadi goobteen.
Laakiin wuxuu sheegay in markii uu ka fariisto kubada cagta, uu dib u milicsan doono guulaha uuna ku raaxeysan doono wixii uu ka sameeyey kubada cagta, bedelkii ay lacag ugu jiri laheyd akoonkiisa Bank-ga.
Ferdy ayaa ku guuleystay shan horyaal oo Premier League, Champions League iyo laba League Cup intii uu u ciyaarayey United.
Wuxuuna qiray inaysan maskaxdiisa ka go’in doonin guulaha uu ka gaaray Old Trafford marka ay da’du liiciso uuna soo xasuusan doono koobabkii uu kusoo xareeyey qolka kooxdu dhigato koobabka.
“Dadku waxay ka hadlayaan lacag dhamaan ciyaartoydii kubada cagta beeso ayey raadsanayaan laakiin anigu sidaas ma ihin, guulo u joog ayaan ahay. Maba ka fakaro meeqo lacag ah ayaad heysataa,” ayuu yiri Ferdinand sida uu qoray wargeyska The Sun.
“Marka aad soo afjarto xirfadaada kubada cagta, waxaad rodolka saari doontaa xirfadaadii aad soo dhameysay.
“Hadii aad koobab kusoo guuleysatay aadna koox weyn lasoo qaadatay guulo, waa wax aad ka hadli doonto.
“Marka aan fariisto kama hadlaayo meeqo lacag ah ayaan heystaa. Waxaan ka hadli doonaa wax badan oo fiican oo aan soo qabtay iyo xiliyadeydii ugu fiicnaa.”